Ungaba njani uMmeli weHlabathi lamaKhuselo
AUnozakuzaku wophawu liqumrhu elikwinqanaba eliphezulu leWorld of Amulets elithatha inxaxheba ngokukhutheleyo kwinkqubo yokwenziwa kwebrendi kunye neemveliso.
Unozakuzaku wophawu lweWOA umamela abalandeli bakhe kwaye abancede ngezisombululo okanye iingcebiso. Ngokuba ngunozakuzaku welizwe leembumbulu, uyinxalenye ebalulekileyo yeqela elinoxanduva olukhulu. Ngesi sizathu, ufumana i-30% ikhomishini kwintengiso nganye.
Nangona kunjalo, ayinguye wonke umntu onokuba ngunozakuzaku.
Iimfuno zokuba ngunozakuzaku weWOA zezi:
Ukuba nobukho beintanethi zentlalo ubuncinci kunye nabalandeli abangama-50.000 (ibonke)
Ukuba namava okusebenza nezinye iimpawu
Ukulungele ukufunda nokuziqhelanisa
AUmntu ophembelelayo ukwayinxalenye ebaluleke kakhulu yeqela le-WOA. Basebenzisa iinethiwekhi zabo zentlalo ukukhuthaza iimveliso kunye neenkonzo zeHlabathi zeAmulets.
Ngokuba ngumphembeleli wehlabathi leembumbulu, uyinxalenye ebalulekileyo yeqela elinoxanduva olukhulu. Ngesi sizathu, ufumana i-20% ikhomishini kwintengiso nganye.
Nangona kunjalo, ayinguye wonke umntu onokuba nempembelelo.
Iimfuno zokuba ngabaphembeleli be-WOA zezi:
Ukuba nobukho beintanethi zentlalo ubuncinci kunye nabalandeli abangama-10.000 (ibonke)
AUkuba lilungu lenkqubo yethu yindlela ekhawulezayo nelula kakhulu yokwenza imali eyongezelelweyo okanye umvuzo osisigxina. Siyazingca ukuthi sineyona nkqubo ilungileyo nelula yokudibanisa kwihlabathi. Wonke umntu unokukwenza oku. Kulula njengokukopa kwaye uncamathisele amakhonkco kwiinethiwekhi zakho zoluntu ozikhethayo Sine-app yokwenza oku. Ideshibhodi yeenkqubo ilula kwaye isebenziseka lula. Phantse akukho jiko lokufunda. Umzuzu owamkelweyo kwiprogram, uya kuba ulungile kwimizuzu embalwa ukuqala ukufumana ingeniso eyongezelelweyo kwaye ukuba ulandela iingcebiso zethu kwiforum yeqela lethu, unokwenza lula ingeniso eyongezelelweyo. Ngexesha lobhubhani we-covid, le inokuba yenye yeendlela ezimbalwa zokusinda kwezoqoqosho
Isishwankathelo sephaneli yakho apho unokufumana khona olona lwazi lubalulekileyo njengekhonkco lakho lobuqu, ikhonkco levenkile, iikhuphoni onokuthi uzenze kunye nemivuzo yakho. Uya kufumana iithebhu ezininzi zolwazi lwakho lobuqu, amakhonkco okuvelisa izixhobo, ukuyila kunye namanani.
Iphaneli ilula kakhulu ukuyisebenzisa. Nomntwana wayekwazi ukuyenza loo nto.
Kwicandelo lezixhobo uya kufumana isixhobo esilula sokudala ikhonkco. Khuphela nje naliphi na ikhonkco kwindawo yethu kwindawo ekhohlo kwaye indawo elungileyo iya kudala ikhonkco lakho lobuqu ngokuzenzekelayo.
Ukusuka apha ungabelana ngekhonkco lakho lobuqu kufacebook, twitter, pinterest okanye kuwhatsapp. Akunakubakho ndlela ilula.
Sifumanise ukuba ukwabelana ngamanqaku kwindawo yethu iiyenye yezona ndlela zisebenzayo zokunyusa umvuzo wakho.
Ndicinga ukuba le iya kuba yi-2nd ithebhu etyelelwe kakhulu kwiqela lolawulo. Apha ufumana umvuzo wakho. Uya kuzibona ngomhla, iodolo kunye nemali. Oku kuya kukunika umbono ocacileyo malunga neziphumo zonyuselo lwakho
Ithebhu yezibalo iya kukunceda uqonde ukuba ungagxila phi kwiinzame zakho zokuthengisa. Ibonisa amaphepha, iiwebhusayithi kunye neenethiwekhi zentlalo ezithumela ukugcwala kwakho kwindawo yethu.
Dibanisa oku kunye nezibalo zakho zomvuzo kwaye uyazi kakuhle ukuba iyasebenza kwaye yintoni engasebenziyo.
Le nkqubo yeyona ndlela ilula yokwenza ingeniso eyongezelelweyo ngaphandle kokushiya ikhaya lakho.